प्रविधि विवादका कुरा- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
अक्षयकुमार धेरै फिल्म खेल्छन् । र, ती सबै हिट पनि हुन्छन् । यो कसरी सम्भव भइरहेको छ ?
अक्षयकुमारको एउटा फिल्म हलबाट उत्रिसकेको हुँदैन, अर्को फिल्मको ट्रेलर आइसक्छ  । वर्षमा सरदर ४ फिल्म खेल्छन् नै  ।
योभन्दा अचम्मचाहिँ उनका सबै फिल्म हिट हुन्छन् । पछिल्लो फिल्म हाउसफुल ४ लाई छोड्ने हो भने अक्षय अभिनीत फिल्मले समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । मिसन मंगल, केशरी, गोल्ड, प्याडम्यान आदि–आदि । बलिउड हंगामाका अनुसार सन् २०१९ मा उनका तीन फिल्मले भारतभित्र ५ सय ५१ करोड भारु कलेक्सन गरेको छ । यो कमाइले उनलाई बलिउड अभिनेतामध्ये शीर्ष स्थानमा राखेको छ । ऋतिक रोशन, सलमान खान, विक्की कौशलजस्ता स्टारलाई उछिनेका छन् । अघिल्लो वर्षचाहिँ दुई र रनवीर सिंह एक नम्बरमा थिए ।
बलिउडमा तीन खान (शाहरूख, आमिर र सलमान) को साम्राज्य डगमगाइहेको छ । शाहरूखको करिअर त साँच्चै संकटमा छ । लालसिंह चड्डाबाट आमिर साख फर्काउने प्रयासमा छन् । सलमानलाई भारतले राहत थियो । तर समकक्षी हिरो अक्षयचाहिँ संख्या र सफल दुवै हिसाबमा अग्रपंक्तिमा छन् । यही कारण हुनुपर्छ, यतिबेला उनलाई बलिउडमा ‘बक्सअफिस किङ’ को पगरी गुथाउन थालिएको छ । अक्षयप्रति आमदर्शकको प्रेम किन पनि घनीभूत हुँदै छ भने पहिले हल्का कमेडी र एक्सनमा मात्र सीमित हुन्थे, अहिले सार्थक सिनेमातिर फड्को मार्दै छन् । र, उनी आफैं पनि भन्न थालेका छन्, ‘बल्ल मैले चाहेकोजस्तो सिनेमा खेल्न पाउँदै छु ।’
अक्षयको संघर्ष नियाल्ने हो भने अहिलेको सफलताको बलियो हकदार लाग्छन् । तीस वर्षअगाडि ‘आज’ नामक सिनेमामा झुल्किएका थिए, पहिलोपटक । राज बब्बर र स्मिता पाटिलको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्मले उनलाई खास फाइदा दिलाएन । त्यसैले सौगन्धलाई उनको खास डेब्यु मानिन्छ । त्यसपछि केही फिल्म खेल्ने अवसर मिल्यो तर सबै फिल्ममा एक्सन भूमिका मात्र हुन्थ्यो । बलिउड फिल्ममेकरमा छाप बसिसकेको थियो, अक्षयले एक्सनबाहेक अरू रोल गर्नै सक्दैनन् । महेश भट्टजस्ता केही फिल्ममेकरले त मुखै फोरेर भनेका थिए, ‘एक्सन गराउनु छ भने अक्षयलाई लिनु, अभिनय गराउनचाहिँ नलिनु ।’ एक्सनकै कारण उनले टन्नै फ्यान त कमाए तर अभिनेताको रूपमा अनेक भूमिकामा आफ्नो अभिनय क्षमता देखाउन पाएनन् ।
बीचमा केही कमेडी फिल्मलाई बिर्सने हो भने लगभग पाँच वर्षअगाडिसम्म अक्षय एक्सनमै सीमित थिए तर रुस्तमले उनको अभिनय कौशलको नवीन पाटो उघारिदियो । नत्र यसअघि त सिंह इज ब्लिंक, गब्बर इज ब्याक, बोस, इन्टरटेनमेन्ट, तीस मार खानजस्ता एक्सन–कमेडी फिल्ममा सीमित थिए । जोली एलएलबी २ पनि उनको ख्याति बढाउन सहायक बन्यो । ट्वाइलेट ः एक प्रेमकथाले चाहिँ अक्षयको छवि पूरापूर बदलिदियो, त्यो भनेको उनका सिनेमाका कथा र उनको चरित्र समाजसँग नजिक हुन थाले, जुन पहिले उनीसँग अपेक्षा नै हुँदैन्थ्यो । शौचालय नभएकै कारण पति–पत्नीबीच फाटो आउने दर्दनाक कथा बोकेको यस फिल्मले ३ सय ११ करोड भारु कलेक्सन गर्‍यो । ‘हिरोजस्तो नलाग्ने’ चरित्रमा समेत अक्षयले आफूलाई जीवन्त बनाए ।
अक्षयको अब लगत्तै रिलिज हुने फिल्म हो, गुड्न्युज । त्यसपछि सूर्यवंशी, लक्ष्मी बम्ब र पृथ्वीराज क्रमैसँग आउनेछन् । यति धेरै फिल्म खेल्ने समय र ऊर्जा कहाँबाट आउँछ ? उनले बरोबर सामना गनुपर्ने सवाल हो यो । जवाफ पनि उस्तै हुनेगर्छ, ‘फिल्म खेल्नेबाहेक मेरो अर्को काम छैन । मेरा लागि फिल्म अझ कम भयो ।’